Hordhaca walxaha ilkaha ee YUCERA
Waxay ku taal aagga dhaqaalaha gaarka ah ee Shenzhen, Shenzhen Yurucheng/YUCERA Dental Material Co., LTD waa shirkad dhammaystiran oo ku takhasustay horumarinta, soo -saarka iyo suuq -geynta Ilkaha Zirconia Ceramic Block. Sida soo -saareyaasha Block Zirconia Block ilkaha, Yurucheng Cherish mabaadi'da ...
Safar cusub oo isdhexgalka warshadaha, is gacan qaad iyo curinta cutub cusub
Qalabka ilkaha ee Shenzhen Yurucheng Co., Ltd., oo aasaasay meela dhaadheer oo cusub mar kasta, wuxuu keenay daqiiqad taariikhi ah oo muhiim ah. Bishii Abriil 12, 2021, Shenzhen Yurucheng Qalabka Ilkaha Co., Ltd. iyo Shenzhen Farshaxanka Ilkaha ee Teknolojiyadda Guriga Co., Ltd. si rasmi ah u Saxiix istiraatiijiyad ...
Tartankii Xirfadaha Shaqada ee Yucera Koowaad
Tartankii ugu horreeyay ee xirfadaha shaqo ee Yucera ee maaddada zirconia block ayaa bilaabmay 12 -kii Luulyo, kaas oo uu kafaalo qaaday Xafiiska Maareeyaha Guud. Munaasabadda oo dhan waxaa loo qaybiyay saddex qaybood: diiwaangelin iyo dib-u-eegis, tartanka goobta, iyo sawir-kooxeed abaal-marin ah. In ka badan 30 qof ...
Ku adkee hadafkaaga, oo sii wad dhiirigelinta.
Kulanka kooban ee Yu Rucheng ee sannadka 2021 ayaa si sharaf leh loo qabtay. Iyada oo uu hogaaminayo maareeyaha guud Mr. Liu Jianjun, aqoonyahannada waaxda suuqgeynta ayaa la yimid riyooyinkooda, iyagoo soo koobaya shaqo la'aanta qeybtii hore ee th ...
Waa maxay Zirconia Block?
Sida aan wada ognahay waxaa jira saddex nooc oo alaab ah oo loo isticmaalo dib u soo celinta ilkaha: alaabada xannibaadda zirconia iyo walxaha birta ah. Zirconium oxide waxay u dhacdaa sida monoclinic, tetragonal iyo crystal cubic. Qaybaha si qallafsan u qallafsan ayaa loo soo saari karaa qaabab kubadeed iyo/ama tetragonal crystal ah. Si looga hortago ...
Yucera waligeed ma joojiso talaabadooda si ay hore ugu socoto.
Sida soo-saare xirfadle u ah CAD CAM silsiladaha dhoobada dhoobada zirconia ilkaha, Yucera waxay leedahay himilada “ay ka go’an tahay inay soo saarto agabyada zirconia ilkaha oo tayo sare leh oo caafimaad qaba iyo dhisidda summad caan ka ah adduunka oo ah qalabka zirconia ilkaha”; Yucera waligeed ma joojiso talaabadooda si ay hore ugu socoto. Con ...
Bandhigga Caalamiga ah ee Dental South China 2021 wuxuu si rasmi ah ugu dhammaaday qoraal dhammaystiran.
Bandhigga Caalamiga ah ee Dental South China 2021 wuxuu si rasmi ah ugu dhammaaday qoraal dhammaystiran. Qalabka ilkaha ee Shenzhen Yurucheng Co., Ltd. waxay sii wadaan inay hore u sii qaadaan! Afarta maalmood ee Ilkaha Sidaas ...
Qalabka Ilkaha Zirconia Block
Dhammaan budada zirconia ee ganacsi ahaan la heli karo isku mid ma aha. Farqiga u dhexeeya badeecadaha cabbirka hadhuudhka iyo waxyaabaha lagu daro ayaa si weyn u koontaroola xoogga qalabka xannibaadda zirconia, xasilloonida muddada dheer, iyo hufnaanta. 1. Intaas waxaa sii dheer, hababka kala duwan ee ay ilkaha zir ...